Sannad sagaalaadka dugsiga
Kadib 9 sano oo dugsi ah, shuruudaha waxbarashada qasabka ah ayaa dhamaanaya
Austaria, sagaalka sano ee dugsiyeedku waa qasab. Carruurta dhigata dugsiga barbaarinta ama ku celiyay sannad waxay dhammeeyaan waxbarashadooda qasabka ah markay dhammeeyaan dugsiga sare ee dhexe ama fasalka 4aad ee AHS.
Haddii kale, sannadka 9aad ee dugsiga waxa lagu dabooli karaa dugsi farsamada ama dugsi ganacsiga oo hal sano ah. Dugsiyadani waxay ardayda u diyaariyaan tababarka farsamooyinka ficil ahaanta loo sameeyo.
Waxa kale oo suurtogal ah in lagu dhammeeyo fasalka 9aad ee dugsiga dhexe ama dugsiga sare ee farsamada ama AHS. Warbixinta kama dambaysta ah ee wanaagsan ayaa sahlaysa xirfada barashada intaas wixii ka danbeeyo.
Heer gaar ah ee tababarka ayaa waajib ku ah dhalinyarada: mas'uuliyiinta sharciga ah waa in ay xaqiijiyaan in raacida waxbarashada qasabka ah, dhalinyaradu ay helaan tababar ilaa ay ka gaarayaan 18 sano jir. Tababarka dhalinyarada ama AMS (Adeegga Shaqaalaysiinta Dadweynaha) waxay ka caawiyaan dhalinyarada inay ogaadaan xiisahooda iyo haybadooda oo ay ula yimaadaan qorshe gaar ah waqtiga tababarkooda.